Digital Patrika – सुदूरपश्चिमका दुई आयोजनामा बैङ्कहरूको लगानी
सुदूरपश्चिमका दुई आयोजनामा बैङ्कहरूको लगानी
२० भदौ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रस्थित बझाङमा निर्माण हुने दुई जलविद्युत् आयोजनामा दुई भिन्न बैङ्कको नेतृत्वमा बैङ्कहरूले लगानी गर्ने भएपछि निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । निर्माण हुने आयोजनाहरूमा ३८ दशमलव ४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालङ्गागाड जलविद्युत् आयोजना र १५ दशमलव ३३ मेगावाट क्षमताको कालङ्गागाड जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । अघिल्लो आयोजना सानीगाड हाइड्रो प्रालि र पछिल्लो आयोजना कालङ्गा हाइड्रो प्रालिको प्रवर्द्धनमा बन्न लागेको हो । दुवै कम्पनी एउटै व्यावसायिक समूहका हुन् । दुवै आयोजनामा गरेर बैङ्क समूहले रू. ६ अर्ब ८४ करोड लगानी गर्ने बताइएको छ । यो रकम कुल लागतको ७५ प्रतिशत हो ।
सोमवार भएको ऋणसम्बन्धी सम्झौताअनुसार माथिल्लो कालङ्गागाड जलविद्युत् आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैङ्कको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, एनसीसी बैङ्क, सनराइज बैङ्क, जनता बैङ्क, कुमारी बैङ्क र सिभिल बैङ्कले लगानी गर्नेछन् । यो आयोजनामा बैङ्कहरूले कुल लगानी रू. ४ अर्ब ७४ करोड हुनेछ । सो सम्झौतामा बैङ्कहरूका तर्फबाट माछापुच्छ्रेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम र आयोजनाका तर्फबाट प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसैगरी कालङ्गागाड जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैङ्कहरूको नेतृत्व भने एनएमबी बैङ्कले गरेको छ । सो आयोजनामा एनएमबीसहित एनआईसी एशिया, सिभिल बैङ्क, जनता बैङ्क, देवः विकास बैङ्क र ज्योति विकास बैङ्कले लगानी गर्ने बताइएको छ । ती बैङ्कले कुल रू. २ अर्ब १० करोड लगानी गर्नेछन् । सो सम्झौतामा बैङ्कहरूका तर्फबाट एनएमबी बैङ्कका ऋण व्यापार प्रमुख नवीन मानन्धरले हस्ताक्षर गरे ।
दुवै आयोजनामा बैङ्कहरूबाट हुने लगानी आयोजनाको कुल लागतको ७५ प्रतिशत हो । बझाङ जिल्लाको दहबगर, खिरातडी, सुनकुडा र बाँझ गाविसमा पर्ने ती आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आउँदो असोजमा शुरू भई २०७६ सालको भदौमा सकिने लक्ष्य छ । सम्बद्ध कम्पनीहरूले पहुँचमार्ग, स्थलगत कार्यालय निर्माण र आवश्यक विद्युत् लाइन विस्तारको कार्य भने गतवर्षदेखि नै थालिसकेका छन् । दुवै आयोजना सम्बद्ध कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि शेयरसमेत जारी गरिने बताइएको छ ।